'' အိမ်ထောင်ရှင် ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန် " | Radio Veritas Asia
ဒီတစ်ပတ် သီရိဂေဟာ အစီအစဉ်မှာ '' အိမ်ထောင်ရှင် ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန် " အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
တင်ဆက် - ဒေါ်ဂျူလီယာကြူကြူခင်
Photos Credit - Google Images
#အိမ်ထောင်ရှင်ဇနီး #rvapastoralcare #Family
ဇနီးမယားဆိုတာ အိမ်ထောင်တစ်ခုနဲ့ လက်တွဲဖော် ကတ္ထိလိင်အမျိုးသမီးကို ဆိုလိုတာပါ။
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာက ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းခလေးဘဝကနေ တဖြည်းဖြည်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ အမျိုးသားနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသွားတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဇနီးမယားလို့ အဓိပ္ပါယ်ယူလို့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တော့ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီး ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီဇနီးမယားဟာ မိမိအိမ်ထောင်ကို healthy marriage ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမှသာ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရမှာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ချစ်ရမယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောက ခင်ပွန်းအပေါ်မှာ ကတိသစ္စာတည်ရမယ်။ sexual faithful ဆိုတဲ့ တဏှာရာဂမှာ ယုံကြည်ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်စွမ်း ရိုးသားပြီးယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ ကျိုးစားရတော့မယ်။
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးဘဝဆိုတာ မိမိလုပ်ကိုင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို လက်ထပ်ပြီးရင် ရပ်ဆိုင်းတော့မှာလား? ဆက်လုပ်မှာလား? မိမိခင်ပွန်းနဲ့ အိမ်ထောင့်တာဝန်ကို မျှပြီး ယူကြမှာလား အသေအချာဆွေးနွေးရတော့မယ်။ ဒါမှသာ မိမိတို့နှစ်ဦး ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သာယာတဲ့ အိမ်ထော­င်ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။
ခင်ပွန်းကလည်း မိမိဇနီးကို life partner အဖြစ် သစ္စာရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူ ယုံကြည်အားထားရတဲ့သူအဖြစ် ဖြစ်စေချင်တာပါ။ ဇနီးမယားက သူ့ရဲ့ဘေးကနေ အမြဲရပ်တည် ပေးစေချင်တဲ့သူပါ။
ဇနီးမယားကလည်း သူတည်ထောင်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ကို ကောင်းသတက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားရတော့မယ်။
ကိုယ်ပြောသမျှ၊ ကိုယ်လုပ်သမျှ မှန်တယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တိုင်းမှန်တယ်ဆိုတာတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ရတော့မယ်။ ခင်ပွန်းက မိမိနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်မိရင်လည်း ဒါကို အမှားလို့ ယူဆလို့ မသင့်ပါဘူး။ အတင်းအကြပ် မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကိုလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဇနီးမယားဆိုတာ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို Control ပဲလုပ်သင့်ပါတယ်။
ခင်ပွန်းနဲ့ ဇနီးဆိုတာ သဘာဝတရားကြီးကနေ ပေါင်းဖက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိက ကြင်ဖော်ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နီးနီးကပ်ကပ်ရှိရတော့မယ်။ ရင်းရင်းနှီးနှီးအကျွမ်းတဝင်ရှိရ မယ်။ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက် ဖြစ်နေရမယ်။
မိမိရဲ့ မိဘ သူငယ်ချင်းတွေထက် မိမိခင်ပွန်းကို ပထမဦးစားပေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒုတိယလူ မဖြစ်သွားဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို ကိုယ့်ရဲ့ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းလို မပြုမူ၊ မဆက်ဆံသင့်ပါဘူး။ အများရှေ့ မှာ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို နှိမ့်ချဆက်ဆံတာမျိုး၊ မြည်တွန်တောက်တီးတာတွေက ကိုယ်ခင်ပွန်းကို မရိုမသေ မလေးစားတဲ့ သဘော သက်ရောက်စေပါတယ်။
ကိုယ့်ဖခင်က ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်ကို ဆက်ဆံသလိုမျိုး မိမိခင်ပွန်းဆီက အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကို မမျှော်လင့်ဖို့က လိုပါသေးတယ်။
အကြောင်းအရာ အခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး မိမိပြောထွက်မဲ့ စကားကို ဆင်ခြင်ပြီးမှ စကားကို ပြောပါ။
ခင်ပွန်းသည်ကို အကြောင်းအရာ အသေးအမွှားလေးတွေနဲ့ မသိုးမသန့်ဖြစ်စေမဲ့ ခံစားချက် မျိုးကို မပေးဖို့ သတိထားရပါမယ်။
ခင်ပွန်းရဲ့ ဝင်ငွေနည်းတာ၊ များတာကို ထောက်ပြီးဆက်ဆံတဲ့ အပြုအမူမျိုးရှောင်ရပါ့မယ်။
ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်ဆိုတာ ခင်ပွန်းရဲ့ အားကိုးလေးစား ဂုဏ်ယူထိုက်တဲ့သူ.အဖြစ် အမြဲတမ်း ရှိနေဖို့ လိုပါတယ် ဆိုတာကို တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။